यस्तो छ गुरूको महत्व, जानी राखौ
जुलाई 17, 2019 जुलाई 17, 2019 साइन्स इन्फोटेक0Comments गुरू, डा. राम बहादुर बोहरा
गुरू पुर्णीमा गुरू मान्ने दिन हामीले आजको दिनलाई अन्य दिन भन्दा फरक दिनको रूपमा मान्नु पर्दछ । गुरु एक मार्गदर्शक हुन् । असल बाटोमा हिंड्न अभिप्रेरित गर्न सक्ने व्यक्ति, जुनसुकै उमेर वर्गको लाई पनि हामी गुरुको दर्जा दिन सक्छौ ।
गुरू विना यो संसार अन्धकार छ । गुरूलाई मान्ने शैलीमा भर पर्छ । माता पिता पनि गुरू हुन सवैभन्दा ठूलो भूमिका माता पिताले निभाएको देखिन्छ । गुरू हामीले जानकारी दिने सिकाउने जुनसुकै किन नहोस् गुरूको रूपमा मान्नुपर्छ ।
यस्तै गरी निराशामा लुकेको आशा नै गुरु हो । आफूमा भएको सत् विचार र अगि बढ्ने चाहना पनि गुरु हो । यसरी हामीले गुरुका मुर्त एवम् अमुर्त रुपको पहिचान गर्न सक्छौं । मान्छेको गुरु मान्छे नै हुन्छ भन्ने ज्ञान सबैमा हुन आवश्यक छ । गुरूलाई थुप्रै रूपमा हेर्न सकिन्छ ।
भर्खरै जन्मेको एउटा जंगली जनावरको बच्चालाई हिंड्न सिकाउने गुरु पनि प्रकृति नै हो भने वनस्पतिलाई उब्जन सिकाउने गुरु पनि प्रकृति नै हो । सवै गुरू भइकन पनि सवैभन्दा महत्वपूर्ण गुरूको स्थान माता पिता र आँखा देखाउने गुरूलाई सवैभन्दा उच्च स्थान दिन सके सार्थक हुने हामीलाई लागेको छ ।
← टाउको दुख्नुका कारण र उपचार
बिहीबार के के काम गर्दा सफलता मिल्छ ? →